Oovimba abagcina ugcino lweoli
Udidi: i-oyile endala
I-USOIL (WTI) ibuyela endaweni yayo njengeeBulls kunye neeBhere zokuCamngca ngokuHamba okulandelayo
7 Juni 2021 | Ukuhlaziywa: 7 Juni 2021
Amanqanaba okuGxila aphambili: $ 66.00, i-$ 70.00, i-$ 74.00
I-USOIL ikwi-uptrend. I-WTI inyukele kwi- $ 69.32. Ioyile ekrwada ijongene nokuxhathisa kwinqanaba eliphezulu. Ngeli xesha, ngo-Epreli 20 uptrend, umzimba wekhandlela owabuyisa umva wavavanya inqanaba lokubuyisa le-50% yeFibonacci. Ukubuyiselwa endaweni kubonisa ukuba i-WTI iya kunyuka iye kwinqanaba le-2.0 yokwandiswa kweFibonacci okanye inqanaba le- $ 70.71.
I-USOIL (WTI) ikwinqanaba lama-66 lamaNqanaba aMandla aNxulumene naMandla isiGaba se-14. Ibonisa ukuba i-USOIL ikwi-uptrend kwaye ingaphezulu kwe-50. Ixabiso le-WTI lingaphezulu kwee-SMAs ezibonisa ukuba intengiso iya kunyuka.
Kwitshathi yeeyure ezi-4, ixabiso le-WTI likwi-uptrend. Ukunyuka okuphezulu kujongene nokuchasana kwinqanaba lama- $ 70. Okwangoku, nge-1 kaJuni uptrend, umzimba wekhandlela obuyise umva kuvavanywa inqanaba lokubuyiselwa kwe-Fibonacci engama-50%. Ukubuyiselwa kwakhona kubonisa ukuba i-WTI iya kunyuka iye kwinqanaba le-2.0 yokwandiswa kweFibonacci okanye inqanaba leedola ezingama-71.34.
Ixabiso le-WTI lingaphantsi kwe-80% yoluhlu lwe-stochastic yemihla ngemihla. Imakethi iyakhula kwaye inamandla okukhula ngokuchasene nesalathiso se-stochastic. Iintsuku ezingama-21 kunye neentsuku ezingama-50 ze-SMAs zihlehla phezulu zibonisa uptrend.
USOIL (WTI) ikwindawo ephezulu. Ioyile ekrwada ifikelele kwinqanaba eliphezulu le- $ 70 kodwa ijongene nokuchasana. Ixabiso libuyela umva ukusuka phezulu kutshanje. I-uptrend iya kuqhubeka kwakhona ukuba ifumana inkxaso ngaphezulu kweentsuku ezingama-21 kunye neentsuku ezingama-50 ze-SMAs.
31 May 2021 | Ukuhlaziywa: 31 May 2021
I-USOIL (WTI) ikwiPhezulu yokuHamba, ukuLala ubuso kwi $ 68 ePhakamileyo
USOIL iphinde yaqala ukunyuka phezulu. I-WTI iyehla emva kokuphinda uhlole i-65 yeedola ephezulu. I-USOIL inyuke ngaphezulu kwe- $ 61 njengexabiso elifikelele kwi-65 yeedola ephezulu ngaphambi kokuhla kwayo. Ukunyuka okuphezulu kuqhubekile ngaphezulu kwenkxaso ye- $ 57. Ngeli xesha, ngo-Epreli 20 uptrend, umzimba wekhandlela obuyileyo uvavanye inqanaba lokubuyisa le-Fibonacci 61.8%. Ukubuyiselwa kwakhona kubonisa ukuba i-USOIL iya kunyuka iye kwinqanaba le-1.618 yeFibonacci eyandisiweyo okanye ephezulu yeedola ezingama-64.34.
I-USOIL (i-WTI) inyukele kwinqanaba lama-56 leNdawo yokuDityaniswa kwamaNqanaba aMandla aMandla aHlanganisiweyo 14. Ibonisa ukuba i-USOIL ikwi-uptrend kwaye ingaphezulu komgca osembindini wama-50. Ii-SMA zeentsuku ezingama-21 kunye neentsuku ezingama-50 zithambekele phezulu ezibonisa ukunyuka.
Kwitshathi yeeyure ezi-4, ixabiso le-WTI lihamba kwicala elingaphantsi kwenqanaba lokumelana ne- $ 65. Ngalo lonke ixesha ixabiso liphinda libuyise inqanaba lokumelana ne-WTI liza kwehla liye kuma- $ 61 ephantsi. Ngo-Epreli 29 uptrend umzimba wekhandlela obuyiselweyo uvavanye ulwandiso lwe-Fibonacci engama-61.8%. Ukubuyiselwa kwakhona kubonisa ukuba imakethi iya kunyuka iye kwinqanaba le-1.618 yeFibonacci eyandisiweyo okanye i-68.31 ephezulu yeedola.
Ixabiso le-WTI lingaphantsi kwe-50% yoluhlu lwe-stochastic yemihla ngemihla. Imakethi ikwi-bearish umfutho weentsuku ezingama-21 kunye neentsuku ezingama-50 ze-SMAs zitshibilika phezulu zibonisa uptrend.
USOIL (WTI) ikwindawo ephezulu. Ukunyuka okuphezulu kujongene nokwaliwa kwi- $ 65 kunye ne- $ 68. Okwangoku, ioyile ekrwada ikho ngokuhla. I-WTI iya kuphinda inyukele phezulu ukuba amaxabiso afumana inkxaso ngaphezulu kweelows zangaphambili
28 April 2021 | Ukuhlaziywa: 28 April 2021
I-USOIL (WTI) ikwiDowntrend, kwinqanaba ekujoliswe kulo $ 55.52
19 Matshi 2021 | Ukuhlaziywa: 19 Matshi 2021
I-USOIL ikukuhla ezantsi emva kokwaliwa ukusuka kwi- $ 68 ephezulu. Ixabiso lihle laya ezantsi kwi-58.25 yeedola. Ixabiso liphule i-SMA yeentsuku ezingama-21 kwaye lisondela kwi-SMA yeentsuku ezingama-50. Uxinzelelo lokuthengisa luya kuqhubeka ukuba amaxabiso aphule ngezantsi kwee-SMAs.
I-USOIL (WTI) ukwinqanaba lama-43 lamaXabiso aMandla aHlanganisiweyo exesha le-14. Ibonisa ukuba amaxabiso akummandla weDowntrend kwaye ungaphantsi komgangatho osembindini wama-50.
Kwitshathi yeeyure ezi-4, i-USOIL isehla. Ngomhla we-10 kuMatshi ezantsi; umzimba wekhandlela ovavanywe ngokutsha uvavanye inqanaba lokubuyiselwa kwe-Fibonacci engama-38.2%. Ukubuyiselwa kwakhona kubonisa ukuba i-USOIL iya kuwa kwinqanaba le-2.618 yolwandiso lweFibonacci okanye iphantsi ye- $ 55.52.
Ioyile ekrwada yeWTI iwele ngaphantsi kwe-30% yoluhlu lwe-stochastic yemihla ngemihla. Ioyile ekrwada ikwi-bearish umfutho. Ii-SMAs zijonge ezantsi zibonisa ukwehla.
USOIL (WTI) kukuhla okuye ezantsi. I-oyile ekrwada ye-WTI ithengisile kwingingqi ethengiweyo. Ixabiso lihle ukuya kuthi ga kwi-58 yeedola. I-USOIL ngoku idibanisa ngaphezulu kwenkxaso ye- $ 58. Uxinzelelo lokuthengisa luya kuqhubeka kwakhona ukuba inkxaso yaphuliwe.
26 Februwari 2021 | Ukuhlaziywa: 26 Februwari 2021
19 Februwari 2021 | Ukuhlaziywa: 19 Februwari 2021
26 January 2021 | Ukuhlaziywa: 26 January 2021
I-Brent yaphula inqanaba lokugcwalisa isithuba kubhubhane
27 Novemba 2020 | Ukuhlaziywa: 27 Novemba 2020
Ngethemba lokunyuka kwemfuno yeemveliso zepetroleum ngenxa yeendaba zokugonya kweCoronavirus ngaphezulu kwe-90% esebenzayo, ukonyuka okukhulu kohambo lomoya, ukunciphisa amanyathelo okutshixiza kunye nerali yesiqhelo yasebusika, ikamva leoyile ekrwada (i-WTI neBrent bahlanganisene ngaphezulu kwamanqanaba amakhulu.
I-Brent ngokukodwa yaphule inqanaba le-45.35 elisisiqalo esizalisekayo kwingozi yendyikitya yokufa eye yabona amaxabiso kwikamva elibi (i-WTI) ihamba gwenxa. Eli nqanaba libalulekile kuba kungekuphela nje yayikukuchasana kwengqondo kodwa neenkunzi zeenkomo zazingakwazi ukuyaphula nangamanyathelo amatsha kwimveliso ebekwe yi-OPEC yokuxhasa amaxabiso eoyile.
Inqanaba elilandelayo elilandelayo ngamanqaku angama-56 nawo ekujoliswe kuko okubaliweyo kokuqhekeka kweflegi kunye nokubuyiswa kwakhona kolwakhiwo ngokubanzi.